Gov. Kim Reynolds ayaa ku dhawaaqday inay fududeyneyso xaddidaadaha qaar iyadoo ka jawaabeysa tirada | KWIT
Somali News 12.16.2020
Intaa waxaa sii dheer, tirada daawadayaasha loo oggol yahay dhallinta dugsiga sare iyo dhacdooyinka cayaaraha qaangaarka ah ayaa la kordhiyay si loogu daro dhammaan xubnaha kaqeyb galayaasha.
Reynolds waxay tiri waxay kudari doontaa xayiraad cusub hadii tirooyinku markale bilaabaan inay sii kordhaan.
Baahinta cusub wali waxaa ku jira waajibaadka maaskaro gudaha ah oo qayb ahaan ah. Waxay socon doontaa illaa 8 Janaayo.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay soo sheegaysaa 14 kale oo Iowans ah inay u dhinteen COVID-19 dhibaatooyin 24-kii saac ee la soo dhaafay, waxaa jiray ku dhowaad 2,000 xaaladood oo cusub oo la soo sheegay, oo ay ku jiraan 51 Gobolka Woodbury.
Heerka waxtarka ayaa xoogaa ka yara hooseeya markale Gobolka Dakota in ka badan 4%. Waxaa jiray 10 kiis oo kale oo wanaagsan maanta iyo 52 dhimasho.
Labada isbitaal ee magaalada Sioux City ayaa la tacaalaya 60 bukaan ah oo qaba COVID-19. Toddobaatan boqolkiiba ayaa keligood la dagaallamaya jirrada. Heerku wuxuu ku jiray seddex lambar laba kaliya labo usbuuc ka hor.
Tyson Foods ayaa sheegtay inay shaqada ka eriday toddobo maamule oo sarsare oo ka tirsan warshaddeeda ugu weyn ee doofaarka ka dib baaritaan madax-bannaan oo lagu sameeyay eedeymo ah inay ku sharaddeen inta shaqaale ee tijaabadan ku heli doonta cudurka coronavirus. Shirkadda ayaa sheegtay in baaritaanka lagu ogaaday dabeecad dhibaato leh oo ka dhalatay toogashada warshadda ku taal Waterloo, Iowa.